Boosaaso:-Maxkamadda darajada 1-aad ee magaalada Bosaaso ee xarunta gobalka Bari ayaa maanta xukun isugu jira dil toogasho iyo xabsi ku xukuntay koox burcad badeed ah oo ay dhawaan ciidanka Badda ee Puntland ay ku soo qabteen Degmada Garacad.
Maxkamadda darajada 1-aad ee magaalada Boosaaso ayaa eedeysanayaasha ay xukunka ku riday waxay isigu jiraan rag gacanta lagu hayo iyo kuwa lagu raadjoogo oo ka baxsaday ciidanka Badda ee Puntland.
Gudoomiyaha Maxkamadda Gobolka Bari Sheekh Aadan Aw-Cabdi oo ku dhawaaqay xukunka kala duwan ee lagu riday eedeysanayaasha waxaana maxkamada la keenay 3 dhalinyaro ah oo ka mid ahaa Burcadbadeedii heysatay Markabka Iceberg-1 waxaana lagu xukumay min 10-sano oo xarig ah iyo ganaax dhan 50 milyan oo Shilin Soomaali ah.
Maxkamadda darajada 1-aad ee magaalada Boosaaso ayaa waxaa kale oo ay soo bandhigtay hub lagu soo qabtay Burcadii laga soo qabtay Degmada Garacad hub kala duwan ay ka mid yihiin 3 Ak-47 iyo hal qori oo PKM.
Shalay ayey ka dhoofeen magaalada Boosaaso ee xarunta gobalka Bari Shaqaalihii la socday Markabkii Iceberg-1 kuwaas oo gaarayey 22shaqaale waxayna ka soo jeedeen wadamo kala duwan.